May 2016 ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Baro Sidee Loo sameeya Boor xayesiin Adiga oo isticmaalayo Photoshop(Cashir muhiim ah)
2:22:00 AM Cashiro-Computer, Photoshop No comments
Waxaan maanta uu cashirkeena ku saabsan yahay sida loo sameyo Boor xayesiin waxa uuna Video-ga aan cashirkaan aan ka sameyay uu socon doona 20-daqiiqo waa dareemi karta sida aan idiinkugu hagar baxay.
Cashirkan ula jeedkiisu waxa waye in dhalinta soomaliyeed ay ka faa'iidestan sidaan wada ogsoonahay photoshopka dadba si ayey u adeegsadan qaar ku sameyo xumaan iyo qaar u adeegsado dhanka wanaagsan.
Cashirka markaad daawato waxa lagaaga baahan yahay in aad soo sameyso Assignment adoo keenayaa cinwaanadan hoos ku qoran ma aha in boorka aan sameyay uu qurxan yahay balse ulajeedku ma ahan sida waxan ula jeday oo kaliya sample ama tusaale aad ku raacdo sameynt boorka in aad ka dhigato.
Boorkii aan cashirka ku sameyay waa kan:
Mid ka dooro Mowduucyadan midkaad jeceshay
Mowduucyada aad so sameyneso waxa kamid ah:
1-Boor ka haadlayo Shirkad koronto
2-Boor ka hadlayo Electonic ama meel lagu gado qalabka Electronica
3-Boor ka hadlayo Hispital
4-Boor ka hadlayo xawalad ama meel lacagta lagu sarifo
5-Boor ka hadlayo Cosmatics ama uduga
Waxaad kuso diresaa: alaqsaa1996@gmail.com
Waxaan ka codsana in aad soo sameyso isla markana aad iiso dirto ana waxan ku balan qaada in aad noqoto mid aan ku casuumo Bloga yacnii bannerkii aad so sameysay in aan saaro webka Fadlan si deg deg kuso same.
Sidoo kale softwarreka Photoshopka waxa ka hele halkaan kala deg ama ka download gareso Photoshop Cs6:
Halkan ku dhufo si aad u Dagsato Photoshop Cs6
waa Potable waa la qaad qaadi kara kaagama baahna in aad ku shubto qaabka aad u isticmaali lahed waxaad ka hele Videoga
Fadlan Share gare cashirkan hadaad ka Faa'iidesatay.
Daawo Muxaadaro cinwaankedu yahay Waad sameyn karta By Sheikh Mustafa Xaaji Ismail(Ka faa'iidesi wacan)
1:42:00 AM Cashiro-Diini No comments
Asc aqiyarey kuso dhawaada Muxaadaro cinwaankedu yahay Waad sameyn karta Waxaana inoo so jeedinayo Sheikh Mustafa Xaaji Ismail
Waxaan rajeyna in aad ka Faa'iidi doontan isla markaana aad asxaabtada kale la wadaagi doontan adinkoo dhahaya Share.
Qurxi wajigaada Adigoon isticmaleyn Daawo Chemical ah (Qormo xiiso leh)
1:05:00 AM Qormooyin No comments
Ma doonaysaa inaad maqaarkaaga iyo wajigaagu qurux badnaado oo uu dhalaalo adigoon isticmaalin wax chemicals ah, balse isticmaalaya waxyaabo dabiiciya oo waxba kuu dhiimayn?
Haddaba Waad noqon kartaa qofka aad rabtid waanad gaadhi kartaa bilicda aad rabtid adigoon isticmaalin chemicals ama creame yada dumarka lagu siro. Waxaan aad uga xumahay in uu noqday jidhka dumarku wax laga ganacsado caalamkan aanu ku nool nahay.
Iyada oo la ogaaday inay dumarku ku bixiyaan millions bilicda iyo daryeelka jidhka, Islamarkaana laga faa’iidaysanayo fursadaas oo kolba shirkadi ay soo saarayso cream ama daawo ay leeyihiin waxaas bay kaa goyn ama ka hortagi.
Laakiin xaqiiqdu wax ay tahay in cream ama daawo bilaa chimecals ahi aanay jirin, Markay ugu yartahay waxaa lagu daraa walxaha ka ilaaliya inuu shaygu uusan qudhmin gaadhina karo ama ooli karo mudo badan iyo waliba midabada. Waa markay uugu yartahay chemicals yada lagu daro cosmatics ka maanta.
Kuwaas waxaa inoo dheer chemicals khatar ah oo lagu isticmaalo, saabuunaha, shampoo yada, make up yada iyo cosmetic yada oo dhan oo keeni kara xanuuno xunxun sida cancer iwm.
Haddaba si aynu iskugu qurxino wax yaabaha dabiiciga ah waxaa lagama maarmaan ah inaad markeeda hore aad tahay qof cuna cunto isku dheeli tiran oo u badan khudaarta, caanaha, kaluunka, digiraha iwm.
Inaad tahay qof seexda hurdo kugu filan oo habeenkii ah iyo waliba caba biyo kugu filan maalin walba. Intaa wixii dheer waxaan muhiim ah inaad taqaanid waxa aad xasaasiyada aad ku leedahay, Waayo wax yaabaha aanu halkan ku sharixi doono way dhici kartaa inaad xasaasiyad ku yeelatid.
Ogowna waxaa dhici karta wax aad xasaasiyad ku leedahay xaga cunitaanka inuu maqaarka waxba u dhimin, ama wax aanad xasaasiyad ku lahayn waxaa dhici karta inuu maqaarka wax u dhimo oo aad ka xajiimootid. Haddaba inta aanad korkaaga marin wax ogow jidhkaagu nooca uu yahay iyo waliba waxa uu dhibsanayo.
Waxaad iska soo qaadi kartaa dhiig aad ku ogaanaysid xasaasiyada jidhka ama ku tijaabi meel jidhkaaga ka mid ah oo bal eeg inaad xasaasiyad ku leedahay.
Intaanad wajiga waxba marin fadlan farahaaga sifiican u maydh, wajigana biyo diiran oo cad ku maydh. Waxaad u samaysaa wajigaaga tuwaal yar oo naacim ah oo u gaar ah oo markasta nadiif ah.
Ogowna inaad wax walba wajigaaga ku tijaabisid waxaa ka fiican inaad baratid wajigaagu nooca uu yahay si aad uula macaamishid waxa ku munaasabaya.
Wax yaabahan hoos ku dhigan oo dhami waa wax aad tukaanka cuntada ama jikadaada ka heli kartid oo wali ku siinaya nafaqooyin, nadaafad iyo bilic.
Waxayna kugu caawinayan in uu caafimaadkaagu hagaago haddii uu Allah(swc) kuu qadaro. Markasta isku dar inaad samaysatid in kugu filan markaas uun oo waxba ka dhigin.
Waxa freshka ah baa ka fiican waxa la dhigo, maadama aanu iska ilaalinayso inay bakteeriya ku dhalato.
Waxaad u baahan tahay :
• Beed/ukun inteeda cad
• Malab saafi ah
• Boorash/ oat meal
Qiyaasta adigu qiyaaso in wajgaaga ama jidhkaaga ku filan. Isku wadda dar kuligood, boorashka yara tun(ridiq) ka dib radi. Kadibna wajiga oo aad biyo cad ku maydhay mari oo ku daa ilaa 25 min kadibna kaga maydh biyo badan oo cad oo meel dhaxaad ah.
• Oliven oil (saliid saytuun)
Isku wadda qas kadibna wajiga oo nadiifa ah saar ilaa 25 min kadib kaga maydh biyo cad oo qandhac ah.
Wajiga aadka u qalalan:
Isku wadda qas kadibna wajiga oo nadiifa ah saar ilaa 25 min kadib kaga maydh biyo cad.
Wajiga iskugu jira mid daalan oo waliba qalalan:
• Beedka inta huruuda/jaalaha ah
• Oliven oil
Isku wadda qas kadibna wajiga oo nadiifa ah saar ilaa 25 min kadib kaga maydh biyo cad. Indhahana khiyaar qabow saaro.
• Waxaad u baahan tahay:
•(saliid saytuunka) Oliven oil
• Khiyaar/ cucumber
Wajiga subaga leh:
• Liindhanaan/ lemon
• Beed inta cad
markad dawooyinka wajiga marinayso ka ilaaasho indhahaaga/
Waxaan rajaynayaa inay ku anfacaan. Waxaan rajaynayaa inaad iska eegtid wixii xasaasiyad ah inshaAllah.
Wax ka ogoow 10-ka websit Soomalida ugu caansan ee Wax ka qora Waxbarashada (Qormo xiiso leh)
12:05:00 AM Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Kulanti wanaagsan aqiyarey meel walba oo aad joogtan maanta waxaan halkan idiin kugu so gudbinaya Qaar kamid ah websityada Ugu caansan ee Dhanka waxbarashada Runtii waa Websityo ama Shirkado isoo jiitay Waxyaabaha ay daawacan waxaan fila in aad ka heli doontit ma aha in ay 10-kan oo kaliya yihiin kuwa wax laga barto oo Afka somaliga ku baxa lkn waa kuwii aan islaha aleelahe waa kuwa mudan in aad ku daawacdid webka .
Sidoo kale waxa xigi doono 10-ka kale oo ku caanbaxay dhanka Siyaasada waxaan so daawacaya kuwa wanaagsan kuwaasi oo qunyar socodka ah oon dad aflagaado u geesaneyn.
Hadaba waa kuwan 10-ka websit oo ku caanbaxay waxbarashada oo Soomalidu leedahay:
Qore Eng:C/risaaq maxamed Rashiid
Fadlan Share Dheh si Asxaabtada kale ugaarto
Daawo Taarikh Nololedka Sheikh Saciid Raage oo dhameestiran
11:54:00 PM DIINI No comments
Aqiyarey waxan halkan idiin kugu so gudbinaya Taarikh Nololedka Sheikh Saciid Raage oo dhameestiran waxaan rajeynaya in aad wax badan oo nalashiisa aad wax ka ogan doontan kuna waana qaadan doontan.
sida loo sameeyo simple application aqrinaayo qoraalka aad rabto in Visual Basic vp net (waxa ku baran karta dhawaqa Englishka)
11:45:00 PM Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Aqiyarey kuso dhawaada Maanta halkan waxaan idiin kugu so gudbinaya Cashir Gaaban kaasi oo ku saabsan waxaana ino so jeedinayo Anigo Ah C/risaaq maxamed Rashiid Fadalan hadaad ka faa'iidesato u gudbi asxaabtada kale wixii Su'aal ah alaqsaa1996@gmail.com kuso dir
Faa'iidada Programka maxey tahay:
Waxa uu abood kuu siina in aad si fudud uu kuugu aqriyo qoraalka aad rabto haduu doono ha ahaado pragraph ama dhoor page waxa uuna anfaca Schoolada dhiga luqada hadaba ka faa'iideysi wacan.
Daawo Muxaadaro ku saabsan Gabdhaha iyo wiilasha is qaawiya Sheikh Kenyawi Ka( Faa'ideysi wacan)
11:41:00 PM DIINI No comments
Aqiyarey Maalin wanagsan Kuso dhawaada Hooyga Waxbarashada Www.ifiyahacilmiga.blogspot.com maanta waxaan halkaan idiin kugu so Gudbinaya muxaadaro cinwaankedu yahay Gabdhaha iyo wiilasha is qaawiya Waxaana ino so jeedinayo Sheikh Kenyawi
Ka Faa'iidesi wacan.
Qiso :Aabe Saladan aad Maalin walba Tukaneyso miyaadan marna iska Dhaafi karin?Jawaabtan layaabka leh ayuu ku islaamay!
11:30:00 PM Qormooyin No comments
Qisadan ayaa ah mid Layaab badan oo ka dhacday Dal kamid ah dalalka aysan
Muslimiintu aanay ku badnayn.
Wiil iyo Aabihiisa oo Gaal iyo Muslim kala ah ayaa aabihii oo aan
heysanin Diinta islamka wiilkiisa ku yiri , Aabo waqti walbo Salaadan
aad tukato waa imisa Maalintii , kolkaas ayuu ku jawaabay wiilkii Shan
waqti waaye aabo oo dhib malahane maad iska soo ilaamtid.
Aabihii ayaa ku jawaabay Maalin kasta waad tukanaa Salaadahan soo
ma’aysan soo noqonayaan salaad walbo xiliga beri xigta oo kale ,
Duhur walbo waqtigaan oo kale waad dukataa berina way imaanaysaaye soo
iskama dhaafi kartid.
Wiilkii ayaa si xikmadeysan uga jawaabay wuxuuna yiri aabo , Maalin
kasta Duhurkii iyo Habeenkii waqtiyo siman ayaad Cuntada cuntaa ,
waxaad joogteeysaa cabista biyaha , Bal kawaran Maanta hadii aad iska
deyso ood beri ka dhigato Cuntada.
Aabihii dhalay wiilka ayaa durbaba dareemay xikmada uu wiilkiisa ku
hadlay wuxuuna ugu Jawaabay Aabo waa sax la iskama dhaafi karo Cuntada
waayo masii noolaan karno hadii aanan biyo iyo Cuntada ku dadaalin.
Wiilkii oo aad u faraxsan ayaa ku jawaabay Salaada iyo Adkaaraha hadii
aan iska daayo sidaas ayeey nolosheydu noqoneysaa , Allihii cuntadaan
iyo Biyahaan si nabad kugu siiyey haku caasinin ayuu wiilkii aabihiis
Nasiib wanaag Hanuunka Alle ayaa iska leh waxaa suurta gashay in
Odaygii uu sidaas kusoo Muslimo.
W/Q: Ahmed Muuse Abdilaahi
5-Shan Qodob oo sababi kara Bur-burka ku yimaada Xiriirka Lamaanaha
11:15:00 PM Qormooyin No comments
Guurku ma ahan ciyaar ciyaar oo waxa uu ubaahan yahay ka hor inta aan la guda galin kafikir dheer waxaan baryahan danbe so baxay dhalin yar badan kuwaasi oo guurka ku deg-dega ayagoona muda ka dibna kala taga Maxey tahay waxa so da'dajiya kala taga lamaanahas is doortay.
Hadaba Shabkada Caalamiga www.ifiyahacilmiga.blogspot.com oo ah Saaxiibka bulshada waxa ay u kuur gashay waxyaabaha keena kala taga Deg Deg ah.
1-Beenti oo so if baxday:Waxa wanaagsan inta aan la isguursan in shukaansiga ama haasawaha lagu base gareyo runta isla markaana laga fogaado been oo idil sido kale waa in aan lakala qarsan Sirta si uu mustaqbalkiina u hagaago.
2-Kalsooni daro:waxa la lama huraan ah in labada qof ay isku qabaan kalsooni oo hadeysan meesha aalin kalsoonida wax soconayo ma jiran waana in lamaanaha uu ku kalsonado midba kan kale.
3-Isfahan daro:isfahan darada ama qilaafka marwalba wuu imaan kara oo waxa la yahay bila'aadan daciif ah hadana waa in la isku daya in si dagdag ah wax lo xaliyo si uusan qilaafku u gaarin meel sare.
4-Isu dhiibida dhibaatoyinka:arintan waxa ay imaneysa xili labada qof oo is jecla aya waxa imaanaya dhibatooyin yar yar ayadoona lagu xalin karo in la xaiyo aya waxa ay lamaanihii hada is guursaday ku deg degayan in ay kala tagan
5-Go aan qaadasho:Go'aan qadashadu ma aha wax Fudud oo furiinku waxa uu ubahan yahay ka fikir dheer oo wa in aad uga fikirta sidii aad markii aad Guursaneysay in aad hadana u fakirta mida kale waa la xalin kara qilaaf kasta haku dagdagin Firiin adoo careesan ama xanaaqsan.
Qore:C/risaaq maxamed Rashiid
Qurux iyo Hurdo La'aan Meel ma isla galaan (Warbixin xiiso leh)
1:30:00 AM Qormooyin No comments
Daraasad uu sameyay wargeyska laga leeyahay Dalka Germany ee lagu magacaabo Elli aya lagu shegay in Hurdo La'aantu ay tahay Cadawga ugu weyn ee Quruxda iyo caafimaadka Jirdhka Bila'aadanka.
sido kale wargeysa aya hadalkiisa ku daray in Hurda yaraantu ay Koror ku keynto Miiskanka jirka ayadoona qalqal ku keynta dhecaanka jirdhka
Hurdo la'aanta aya waxa ay sidoo kale keynta dacfi ku yimaada jirka qofka ayadoona sababta Becteria iyo Virus in ay jirdhka kuso qadan weraro kala joogsi aan laheen.
si aad ugu badbaado Dhibatooyinka ay sababto hurda la'aanta isku day in aad seexato ugu badnaan 7 ilaa iyo 8 saacadood maalintiiba.
Wax ka Baro Cuntooyinka Kordhiya Xasuusuta iyo Garaadkaada (Muhiim)
1:01:00 AM Qormooyin No comments
Sida aan wada ogsoonahay Cunooyinku Faa'iidoyin badan ayey ino leeyihiin in kastoo ay taa jirto hadana waxa aynu dhihi karna waxa cunooyinku ay kala yihiin Kuwa caafimaadka Waxyeleyo iyo kuwa kuwa Ka shaqeeya Caafimaadka.
Hadaba waxa qormadan aynu ku eegi donaaaaa qaar kamid ah Cunooyinka Ka shaqeya kor u qaadida Xasuusta iyo Garaadka Qofka waxaana Cunooyinkaasi kamid ah:
Qudaarta Cagaaran Miraha kuwooda kala duwan sida kuwa leh Qolfoofta iyo waliba Kaluunka oo leh Faa'iidoyin aan lasoo koobi karin.
Kaluunka waa mid kamid ah Cunooyinka aas aasiga u ah Koriinshaha maskaxda waxaana laga hela Koriinshaha maskaxda waxaana laga hela 3 mado lagu magacaabo OMIGA3
sidoo kale waxa uu hoos u dhiga dufanka Dhiiga raaca
sidoo kale liin macaanta, muuska, rumaanka, cinabka, tufaaxa, tamaandhada iyo xab-xabku dhamaantood waxa ay ka mid yihiin liiska cuntooyinka kobaca iyo koritaanka maskaxda kow ka ah.
Hadaba balanteenu waa joogteenta Qudaarta cagaaran iyo Kaluunka si aan ugu dadaalno bad ahaanshaha caafimaadkeena
Qaababka la isaga Daweeyo Murugadda (Qormo kooban)
1:04:00 AM Qormooyin No comments
in la murugoodo ama aan la faraxsanaan waaa iska caadi marka ay wax qaldamaan ama uu qof kaa dhinto, dareemadani waxa ay badanaa la tagaan wakhtiga waadna ka soo fiicnaanaysaa.
in aad dareento inaad mar walba daalan tahay
in aad dareento rajo la’aan wax laguma fale ciirsi-laawe ah
tallaabada koowaad ee lagu bogsanayaa waa inaad alle u carartaa, oo aad waydiisataa inuu murugada iyo wal-walka kaa qaado
waa inaad quraan akhriska badisaa
waa inaad aad cuntaa cuntooyin nafaqa leh kana fog cuntooyinka qashinka ah
isku day inaad hesho 7-8 sacadood oo hurda ah habeen kasta
fir-fircoonow xataa hadii aadan dareensanayn sidaas
qorshayso hawl maalmeed
ka fogow diiqad haddii ay suura gal tahay, ama aad kaligaa noqoto
ku biir kooxo taageero oo noqo qof firfircoon
la xidhiidh qof ku xusuusiya alle ama citikaaf samee
daaweynta murugadu waxa ay ka dhalataa is bedal ku yimaada dareenka, qofka tasoo khal-khal galinaya dheecaanada maskaxda.
Fursad Muhiim ah Ku hel interned High Speed ah Lacag La'aan Hadaba sideed ku heli kartaa Intarneddkaasi +Video
12:33:00 AM Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Aqiyarey kuso dhawada Hooyga Barashada Computerka iyo culuumta kale waxaan maanta halkaan idiin kugu so gudbinaya Qaab aad ku heli karto interned High speed ah oo xawarihiisu uu fiican yahay.
Waxa ku suurta galinayo in aad hesho Internedkan waxaad ka heleysa websit Lagu magacaabo
Hadaba Daawo Video-ga Hooose si aad u hesho Internedkaasi Speedka leh
Kusoo dhawaada Muxaadaro Cinwaankedu yahay Hagaajinta Quluubta Waxana ino so jeedinayo Sheikh Maxamed Cabdi Umal (Ka Faa'iidesi wacan)
11:50:00 PM Cashiro-Diini No comments
Kulanti wanaagsan aqiyarey Maalin wanaagsan maal kasta oo aad joogtan Kusoo dhawaada Muxaadaro Cinwaankedu yahay Hagaajinta Quluubta Waxana ino so jeedinayo Sheikh Maxamed Cabdi Umal (Ka Faa'iidesi wacan)
Daawo Sawirada Dabaal Dagi kooxda Leicester City oo Ku Guuleysatay Horyaalka Ingariiska iyo Ahmed Mido Oo Timaha Looga Xiiray Istuudiyaha beIN Sports
12:42:00 AM Tichnlogy-yada No comments
Aduunkan Wax aan la arkeyn malahan Kooxda kubada Cagta Leicester City aya waxa ay hanatay oo ay ku Guuleysatay Horyaalka Dalka Ingariiska Premier League waxaana arintaasi ay Fajac iyo amakaak ku noqotay dad badan oo diidana in qaadi karto kooxda Yar ee Leicester City Premier League .
dadka caanka ah ee Sharadka ku galay in aysan qaadi karin Leicester City Premier League waxa kamid aha Xiddigii hore ee Spurs, Ajax iyo Roma Ahmed Mido kaasi oo usadaliyay Kooxdiisa hore ee Tottenham.
waxaana uu Ciyariyahankan sharad ku galay in hadii kooxda Leicester City Premier League qaado in uu timaha iska xiiri doono.
Daawo Ciyariyahanki sharadka galay oo studiyaha BeIN Sports tinta looga xiirayo
Daawo Sawirada Dabaal Daga kooxda Leicester City
Sidee ku noqon karta Arday wanaagsan kaasi oo Guuleysta (Xog-muhiim ah)
11:42:00 PM Qormooyin No comments
Aqoon iyo akhlaaq wanaagsan oo is weheshaday waxay kaa dhigaan qof dhamays ah. Soomaalidu waxay tidhaahdaa“cilmigu qofna wuxuu ka dhigaa nin, qofna ninamyaw”.Taas oo macnaheedu yahay haddiiba aanad ahayn nin raganimadiisu aad u xoogan tahay waxay ku soo gaadhsiisaa raga, haddii aad markii horeba nin ahaydna, waxay kaa dhigtaa nimanyaw.
xuquuqda waxa iska leh :
Email: buraale10@gmail.comSI-ARAG © Weedhsan Corporation
Waxaa hubaal ah hadii aad qodobadan 4-ta ah Hir galisid in aad ku Guulesan doontit Guurkaada
11:20:00 PM Qormooyin No comments
Sidan wada ogsoonahay Guurku ma'aha wax fudud waxa uu u baahan yahay ka fiirsi dheer dad fara badan waxa ay ka walwalaan Guurkooda ayagoona cabsi weyn ka muujiya sida uu noqon doono mustaqbalkooda lamaane.
waxaa wanaagsan hadii aad guursaneyso in aad qofka aad nolosha la wadageyso aad dhinacyo badan ka fiiriso oo ay ugu weyn tahay xaga Diinta xishoodka Aqlaaqda iyo Dabeecada inta kadib isku day in aad Fuliso qodobadan 4-ta ah oo hoos ku qoran .
1-Noqo mid duceysta:ducudu waa wax wanaagsan oo aad ilaah aad uga baryeso in uu ku siiyo waxaad jaceshay waxaana muhuum ah in aad ilaah subxaanuhu watacala aad mar walba ka barido in uu ku siiyo Lamaane xalaal ah oo wanaagsan kaasi oo aad nolosha la wadaagto.
2-Noqo mid Sahmiya:Waxa wanaagsan in aad sahmiso Lamaane wanaagsan kaasi oo leh Diin aqlaaq maal IWM balse sahmintaas ha noqoto mid laga raadiyo meelaha wanaagsan ee qeerka leh lkn ma wanaagsana in aad ka raadiso ama aad ka sahmiso goobaha xun-xun.
3-Dhab maka tahay in aad Guursato:Waxaa muhiim ah in ay dhab ka tahay Guurka oo aadan lugooyn Dumarka Muslimiinta/Raga muslimiinta ah isla markaana hadaadan diyaarba ahen in aadan galinba hooshan.
4-Wanaaji Qoyska Lamaanahaaga:Waxa muhiim ah in aad wanaajiso oo aad si wanaagsan aad ula dhaqanto Qofka aad mustaqbalka ka rabto Qoyskiisa hadii aad wanaajisa meesha waxa ka dhalanaya Is qadarin iyo is aaminid.
Fadlan share gare Qoraalkan
Daawo Video:Sidee lo sameyaa Facebook Live video ado laga daawanayo facebook si Toos ah
1:41:00 AM Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Aqiyarey waxan halkan idin kugu so gudbinaya Cashir ka hadlaya sida lo sameyo Facebook Live video ado laga daawanayo facebook si Toos ah waxaad na ku sameyn karta mopilkaada Ogoow waxa laga yaba in uu kugu shaqeyn waayo barnamijka hadii aad joogto wadamada qaar.
Sidee lacag uga sameyn karta interned-ka Haku daalin Waqti dhameeska Facebooka (Xog-muhiim ah)
12:24:00 AM Qormooyin, Tichnlogy-yada No comments
Markaan ku leeyahay waxa aad ka sameyn karta lacag Interned-ka ma aha runtii wax Fudud lkn waxa ay u baahan tahay dadaal iyo in aad kastbato macmiishada xaga internedka
hadaan nahay bulshada somaliyed waxaan isku daalina aaladaha Social media-ha oo internedka sidii la rabay uguma faa'iidesano.
waxa jira qaabab Farabadan oo aad uga sameyn karto lacag internedka waxaana kamid ah qaabka caanka ah ee lo yaqaan Google Adsense runtii waa nidaam aad u cajiib ah oo aad lacag uga sameyn karto internedka kaliya waxa kugu gudboon in aad leedahay Blogg/Websit ama channel Youtube Sadaxdaas waa ku sameyn karta .
Dad badan waxa ay aamin sanyihiin in ay xaraan tahay Adsense lkn waxa uu yahay hadaan ku macneeyo waxa ay tahay in shirkada Google-adsense-ga ay websit-yada u xilsaarato in ay xayesiiyan xayesiimaha lo so dhiibto shabkada googleka madaama ay tahay shirkad caalami ah oo aysan intaas oo xayesiin ah wada saari karin pagekeeda waxaana ay taasi badalkeeda u xilsaaratay websityada caalamka in ay ku xayesiiyan webkooda isla markaana ay lacag ku siiso lkn lacagta lagu siinayo waxa ay ku xiran tahaay inta qof ee so booqatay webkaada .
Dhanka kale xayesiimahas oo ay googleks saareyso aya labo ah kuwa xaran ah iyo kuwa iska caadi ah waana la iska xira xayesiimaha xaaranta ah oo kuwaasi oo ku soo bandhigayo nago qaaqawan iyo waxyaabaha xun xun kuwa iska caadiga ah waa sida baaburta guryahay bugaagta qudaarta dharka iwm.
Fadlan share gare Qoraalkaaaan.
Daawo Qaab Fudud oo aad ku format gareyn karto Mopilkaada Hadii aad wadatiti Sumsung
12:00:00 AM Ciladbixin-computer, Tichnlogy-yada No comments
Waxaan cashirkaan aad ku baran doontan qaab fudud oo aad ku format gareyn karto Mopilkaada Sumsungka waxan rajeyna in aad ka faa'iidi doontit insha alaah
Fadlan asxaabtada la wadaag adoo facebook ku sharegareynayo.
Daawo:Dhibatooyinka Tahriibka iyo indho La'aanta Dhalinta(Warbixin)
11:38:00 PM Qormooyin No comments
Tan iyo markii ay burburtay dowladii dhaxe ee soomaliya waxa dalka iska cararay dadyow farabadan kuwaasi oo ka doorbiday nolasha taala dalka mida dibada ayagoona taasi badalkeeda ay dadkaasi qaarkood ay nolol fiican ka helen dalalkii ay nabad galyada u raasaden halka kuwa kalana ay silac ku noolyihiin.
mudooyinkan danbe waxa so baxay muqalasiin dhalinta ku qarqineysa bada iyo saxaraha dheer ee dalalka Libiya Masar iyo Sudan ayagoona ka dhaadhicinaya wax aan jirin una shegaya in si fudud lagu geen doono Yurub.
Waxaad arkeysaa arday jaamaci ah mid jaamacadii ay u dhamatay iyo mid dugsi sare hada ka baxay oo donayan in ay tahriiban maxey tahay waxa ku kalifaya in ay qaatan go'aankan qatarta ah:
1-in ay dhalintan arkayan dhalin yaro asaagooda ah kuwaasi oo ay isyaqiinen ahayen asxaab oo yurub uga dhigay wax weyn .
2-in dhalntan dalkii aysan ka helin wax shaqo ah oo dadka somaliyed iyo dowlada ay shaqaleysiineso oo kaliya qurba joog iyo ajnabi.
3-in ay dhalinta arkayan muqalasiin ka dhaadhicinaya wax aan jirin ayagoona taasi badalkeeda keeni karta in ay qaatan go'aan adag.
Hadaba ila daawo dhibatooyinka uu leeyahay tahriibka: